High Quality Stylish Set Design 17T Carbon rehetra Fibre Derailleur Pulley
* Mety amin'ny SHIMANO DA9100 DA9150 R8000 R8050 fifindran'ny
* Mamonjy 45% rojo friction fanoherana oharina amin'ny 11T mpitari-dalana kodiarana
* Full karbaona fibre tranom-borona
* Ceramic vokany dikan- Ceramic Bead Bearing Version NSK Steel Bearing Version
1. Voalohany, izahao ny visy ny pulley kodia tranom-borona tao aoriana ny derailleur aoriana.
2. Esory ny visy amin'ny T10 screwdriver.
3. hanaisotra ny visy.
4. Esory ary hanosotra ny visy sy ny loharano eo anatrehan'ny fiangonana vaovao karbaona 12-17T tranom-borona.
5. soso-kevitra izahay amboary ny lohataona eto amin'ity lavaka
6. menaka ny titane axle nivory teo anoloan'ny tranom-borona vaovao.
7.Push ny lohataona ao amin'ny lavaka.
8. Havia hanodinana ny tranom-borona, ary manosika ho derailleur aoriana. Manosika rehetra raha ho azo antoka ny positi-oning lahatsoratra mahitsy eo toerana.
9. Tsindrio indray ny visy tao amin'ny lavaka sy nifidy amin'ny T10 screwdrive.
Aluminum firaka Derailleur Pulley Wheel
Aluminum firaka Guide Wheel
Nivory Guide Wheels
Bisikileta Rear Guide Wheel
Cnc Bike bisikileta Guide Wheel
Guide dalamby Roller Wheel
Kamo Pulley Jockey Wheel Part fanampin-javatra
V Groove Guide Wheel-jaza
V Guide Wheel-jaza